Guddina “Addis Ababaaf” Oromoon buqqa’ee baduu hin qabu!
“… Warri bilisummaaf dhabbatnna jedhan, garuu sochii sabaa irraa fagaatani taï¿½ani ilaalan, akka nama osoo qotee hin facaasin midhaan haammachuu fedhuu ti. Isaan kun, warra bokkaa bakakkaa fi balaqqeessa hin qabne hawwan. … Qabsoon sabaa qabsoo sammuu ta’uu danda’a; ykn qabsoo irree ta’uu danda’a; ha ta’u malee qabsaa’uu feesisa. Warri aangoo qaban mirga tokkollee qabsoo malee kennnani hin beekkani.Kennuufillee hin deemani. Saba cunqursaa ofra hinfacifnee yoomiyyu cunqurfamni ittuma fe’ama. ”
Waï¿½ee Finfinnee dha kutaa sadiitti hirree ilaalu dandenya. Hataï¿½u malee waan kutaan sadeen armaa gaditti keessatti ibsinu seenaa Finfinne qofaa osoo hin taane, seena Oromootis.
Namtichi Major W. C. Harris jedhamu, mootumaa Inglizii irra Sahlee Sillaaseetti ergamee, baatii 18fi Sahle Sillaasie wajjiin yeroo turetti weerara Sahle Sellaaseen Oromoo irratti geggeessaa ture dukaa deeme argee, hubatee, macaafa “The Highlands of Aethiopia (1844)”, jedhamu barreesse. Harris macaafasaa keessatti kutaa Bobbaa boojii fi Saaminsaa (saamichaa) jedhu jalatti waa’ee Finfinne gabaabaatti akka armaa gadii barreesse.
“Warranni Amaaraa, otoo Oromoon hinbekini akka galaanaa mandaroota Oromoo irra dhangala’e. Oromoota lubbusaanii baasuuf baqatan ari’aa, midhaan ga’ee ala jiru barbadeessaa, loon ala dheedaa jiru ooffachaa biyyaa Oromoo balleessuu eegalan. Ibiddi isaan mana fi qabeenya naannoo weeraran kanatti qabsiisanii fagoo dhaa mul’ata. Aarri manaaf midhaan gubatu gama-gamatti lafaaf waaqa dukaneessa jira.” Akkasittii biyaa baleessaa, warrani Amaraa gara Finfinne dhangalaï¿½eï¿½ jedha Harris. Kanatti fufee Harris akkana jedhee kataba:
ï¿½Sahle Sillaaseen tarkaanfii waraanni isa fudhachaa jiru ilaalee, fuulli isaa gammachuun ife. Ni boone.
Egaa warri Finfinne dha dinni nutti dhufa jedhani hin yaadne ture jechuu dha. Harris dabale waï¿½ee kanaa akkana jedha:
“Sabin lafa sana qubate jiru, qabbenyasaa gatee lubbusaa baasuuf Inxooxxootti baqachuufilee yeroo hin argatne. … Waraana Amaaraa bosona hunda keessa baqattoota adamsaa, ijoollee fi dubartoota bakka dhokatanii harkisanii qabaa, manguddoo fi dargaggoo osoo hin jedhin, dirree fi bosona keessatti ajjeesaa, qaama-isaanii irraa muratani; biyya erga samanii booda ibidda itti qabsiisani. … Hoorii hunda walitti qabanii ooffatani. Oromotaa marsanii waraanani. Qeï¿½ee fi bakken reeffaa Oromoon guutame. Kannen baqatanii dirreetti bahan akka bineensaa adamfmanii ajjeefamani; ijoollee umuriin baraa sadi’i fi afurii, kan aayyoo fi aabboon damee muka keessa dhoksan, muka irraa buusani akka oolaa qalanini, ykn achumatti rasaasan ajjeesanini. Sa’ati lama keessatti waraanni Amaraa kun lagaa fi dirree Finfinne irra reeffa Oromoo afee, shamarran fi ijoollee qaamin irraa murame iyyisiisaa, “faacha” reeffarraa murate qabatee Finfine keessaa bahe.”
Waa’ee lafa bulti waraana Amaraa yaggu katabu Harris akkana jedha: Sagaleen lafa bultii isaaniti halkan gutu dhagaï¿½amu waan raajitti: Karaa tokko sagalee loon Oromoo goolamee, iyyaaf booyicha durbaa fi dubartii Oromoo boojiï’aan itti roorrisaa jiruu yaggu ta’u; kara gara biraa moo kanatti makamee kan gurraa nama dhuuchu, abidda marsee, fooni dheedhi hoori saame nyaachaa “fukkaraa” fi “qarartoo” waraani Amaaraa godhaa bulee dha. Sagalee kanatti dabalame hirriba kan nama dhorgu, abidda gamaaf gamatti mandaroota Oromootti gubaa jiru halkan gutuu biyya akka gucaa ibsaa bulusaati jedha.
Waggaa 40 caalaa Saahile Sillaaseen Oromoo sama turee bara 1847 keessa ni du’e. Achii booda kan ilma isaa kan Hayilee Melekot tu itti aane. Innis Oromoo hadamsee samuu itti fufe..Garuu bara dheera hin jiraanne. Bara 1855 ni du’e. Waggaa kudhan booddee ilmi isaa Minilik nugusa shawwaa ta’e. Saahile Sillaaseen deebi’e deddeebi’e Ormoo ha wareeru malee, biyya Oromoo qabachuus ta’e keessa turuu hin dandeenye. Qawwee Oromoon hinqabane haa qabatuu malee, Oromoo moï¿½ee of jallatti bulchuu hindandenyee. Eega kan Saahile Sillaaseen dadhabe Miniliki raawwachuu danda’e. Oromoo weraree saamuu qofaa utuu hinta’in, biyya Oromoo koloneefachuu danda’e.
Egaa kana booda, Minilik Inxooxxoo dha gad buï¿½e magaalaa isaa Finfinne irratti ijaarachuu kan danda’e. Lafa Oromoo balabatoota Habashaa fi loltuu isaaf hiree, bara baraan magaalaan babal’achaa dhuffe. Ilmaan Oromoo kan kumaatamaan lakkaawaman qe’ee isaaniiti akka buqa’an godhaman. Lammiin Oromooo qe’ee isaaniitii buqa’an hedduun gara kibba deeman. Kaan gara lixaatti godaanan.
Waï¿½ee Finfinnen Menelikiin qabamuu, Oromoo tokko ‘Inxooxxoo dhaabatani’ jedhee kan aarii isaa geerarsaan dhageessise dhaloota dhalootatti darbee jira. Geerarsisaa akkas jedha:
Hammeenya daangaa hin qabne Mallas raawwachaa jiru kun Oromoo irratti badii guddaa fida. Oromoo qe’ee isaarra buqqisuun kuni Finfinne qofaan kan dhaabatu miti. Oromoof kun galu qaba. Addis Aababaan karaa kibbaa Bishoftuutti dabalama jira. Karaa lixaan Sabbataan darbee deemuf jira. Sandaafaattis diriiruufi. Karaa bahaa Shanootti ejechuuf jira. Karaa lixaa Holotan darbee Ambottuu ni deema. Akeekni Mallas fi gorsituun isaa qaban Addis Ababaa gudditti, kan aadaa fi afaan Oromoo irraa bilisa baatee ijaaruufi. Handhuura Oromiyaatii Oromoo dhabamsuuf. Suutuma suutan kutaa ‘Addis Abebaa guddittiinï Federaala taati. Oromoo badiyyaa fi moggaatti dhiibanii achitti itisanii moï¿½uun salphaa ta’aaf. Asoosama isinitti himaa jirra miti. Kun waan amma ta’aa jiru dha. Farra diinaa kana doomisuun otoo yeroon itti hin darbiin yeroon isaa amma.
Deebiin isaa hiriira qindaa’ee, mormii qindaa’ee dha. Kunimoo Finfinnee tti! Finifinnee keessatti otuu hin ta’in Washingteen, London yooki immoo Melborn tti ta’u hin qabu. Finfinnee keessa lammiin Oromoo 400,000 amma 500,000 ta’u. Kana jechuun magaalaa sana keessa mormii kan geggeessuu danda’an ilmaan Oromoo kuma dhibban lakkawamu jechuudha. Lammiin hammana baayi’atu kun rooroo wayyaneef yoo jilbeeffate salphina guddaa dha. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa waayee kana jabeessee hubachuu qabu. Dhaabbileen Oromoo haqaa magaala sana amma waan hin jirreef itti gafatama seena kan qabu Waldaa Maccaa fi Tuulamaati. Itti dabalees lammii Oromoo miliyoona hedduun lakkaawamani naanna Finfinne qubatani jiruu. Lammiin kun hiriiraa Finfinnetti ta’u kessatti qooda fudhachuun dirqama isaatti. Ilmaan Oromoo magalaawwan Oromoo adda addaa keessa jiraatan warra Finfinnen waliin dhaabbachun hiriira godhuu barbaachiisaa dha. Waan harrï¿½a Finfinne taï¿½e bor Jimmatti, Naqamtetti, Asallaatii, Shaashmanee fi Awaasaatti taï¿½uuf deema. Saboonni cunqurfamoon kibbaas gargaarsa (dirmmannaa) akka godhan gaafatamuu qabu.
1) Maqaan Addis Ababa jedhamu maqaan koloneeffattuu waan ta’eef haqamuu qaba. Magaalticha maqaa ganamaatti deebi’u qabu. Finfinnen Magaalaa guddoo Oromoo taatee turti.
3) Finfinnen waltajjii jarmyoota Oromoo hundaati. Afaanii fi aadan Oromoo dhiibbaa malee Finfinnetti dagaagu qaba. Oromoon miliyoona walakkaa taï¿½an Finfinne otoo jiraatanii afaan saanii akka fedhanitti dhima itti ba’u dadhabuun saanii wanjala guddaa dha. Aadaa fi eenyumaa Oromoo Finfinnetti ni dagaagaa. Finfinnen handhura Oromiyaati!